Tabila mifandraika amin'ny vatana USB (3.0, 2.0, & 1.1)
Tabila mifandraika amin'ny fika ara-batana USB
Tabilao fifanarahana ho an'ny USB 3.0, 2.0, ary 1.1 Connectors
Ny standard Universal Serial Bus (USB) dia mahazatra fa ny olon-drehetra dia afaka mamantatra ny sasany amin'ireo connecteurs fototra mifandray amin'ny USB 1.1 , indrindra ny plugs hita amin'ny jiro sy fikandrana flash , ary koa ireo boaty hita amin'ny ordinatera sy takelaka .
Na izany aza, noho ny USB dia nanjary nalaza kokoa tamin'ny fitaovana hafa toy ny smartphones, ary USB 2.0 sy USB 3.0 no novolavolaina, ny fifandraisana hafa dia nanjary kokoa, mampikorontan-tsaina ny tontolo USB.
Ampiasao ny tabilao ho an'ny solosaina USB ambany eto ambany mba hahitana hoe iza Plugin (lahy connector) dia mifanaraka amin'ny hoe USB kapila (male connector). Ny connexion sasantsasany dia niova avy tamin'ny version USB ho USB version, noho izany dia aoka ho azo antoka ny fampiasana tsara ny iray amin'ny farany.
Ohatra, ny fampiasana ny tabilao etsy ambany, dia azonao jerena fa ny plugs USB 3.0 Type B dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny takelaka USB 3.0 karazana B.
Azonao atao koa ny mahita USB plug 2.0 Micro-A ho an'ny USB 3.0 Micro-AB sy USB 2.0 Micro-AB fonosana.
Zava-dehibe: Ny tabilao fampitahana USB ambany ambany dia natao tamin'ny solosaina voafetra fotsiny ao an-tsaina. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia midika koa izany fa ny fitaovana dia hifanaraka tsara, na dia eo aza ny hafainganam-pandeha mahazatra, saingy tsy misy antoka. Ny olana lehibe indrindra mety ho hitanao dia ny mety ho fampiasana USB 3.0 sasany raha ampiasaina amin'ny ordinatera na fitaovana fampiantranoana izay manohana USB 1.1 ihany.
Tabila ho an'ny fifandraisana USB Connector
Karazana A Soraty ny B Micro-A Micro-B Mini-A Mini-B
3.0 2.0 1.1 3.0 2.0 1.1 3.0 2.0 1.1 3.0 2.0 1.1 3.0 2.0 1.1 3.0 2.0 1.1
Karazana A 3.0
Soraty ny B 3.0
BLUE dia midika fa ny karazana plugin amin'ny version USB sasany dia mifanaraka amin'ny karazana solosaina avy amin'ny version USB iray, RED dia midika fa tsy mifanaraka izy ireo, ary GRAY midika fa ny plug-in na ny fonosana dia tsy misy ao amin'io version USB io.
HDMI sy Computer
External Desktop Graphics Systems ho an'ny solosaina
Ahoana no fomba hamelako ny fitaovana ao amin'ny Manager Manager amin'ny Windows?
Ahoana ny fomba fijeriko ny fepetra apetraka amin'ny Windows?
Fikirakirana Access Key Access BIOS ho an'ny rindrambaiko malaza
Kitendry hitsidihana toeram-piofanana BIOS amin'ny mpamorona BIOS lehibe
Ahoana ny fomba fitsapako ny fametrahana herinaratra ao amin'ny ordinaterako?
Ahoana no fomba hanovana ny Password Password Admin Wireless
Time Machine - Ny fikojakojana ny rakitrao dia mbola tsy mora foana hatramin'izay
Inona no azo atao mba hilalao amin'ny Blu-ray Disc Player?
Ahoana ny fomba hanampiana mpandray ny Bcc amin'ny Hafatra amin'ny Hotmail
Ny Kitendry 7 Best Home Theater an-tariby mba hividy amin'ny 2017
Mitantana ny Finday Chrome sy Google Voice
Ny 9 Best IFTTT applets amin'ny Alexa
Mampiasa Bylines amin'ny Design Newsletter
Android Apps ho an'ny NCAA Basketball
10 amin'ireo tranga farany indrindra ao amin'ny tranonkala
Ahoana ny fandefasana ny mail sy ny solosaina avy amin'ny Gmail amin'ny Outlook.com
Mail.com sy GMX Mail - Free Email Services
IPad Air 2 Mifanohitra amin'ny iPhone 6 Plus
3D-pirinty eo ambanin'ny $ 1,000, toy ny ataonao
Chromecast vs. Apple TV: Iza no fitaovana fiteteana tsara indrindra?
Atombohy ny webcam amin'ny AIM
TV Tuner TVTV ho an'ny solosaina na PC
Set (Console Recovery)
Mianara momba ny Cache amin'ny tranonkala
Ahoana ny fomba fampiasana ireo fantsona Column View ao amin'ny OS X Finder